प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई भने, ‘कम्युनिस्टका नाममा खडा गरिएको बुख्याँचा, एक मुठा घाँस देख्यो भने दौडिन्छ’ « Pahilo News
प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई भने, ‘कम्युनिस्टका नाममा खडा गरिएको बुख्याँचा, एक मुठा घाँस देख्यो भने दौडिन्छ’
प्रकाशित मिति : 22 July, 2016 1:20 pm
७ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई सम्झिँदै माओवादीलाई कम्युनिस्ट सिध्याउन खडा गरिएको बुख्याँचाको आरोप लगाएका छन् ।
पुष्पलालको ३८ औँ स्थापना दिवसमा उनीप्रति श्रद्धाञ्जली लिन चम्पादेवीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे, ‘तरकारी बारीमा चराको बुख्याँचा खडा नगरेर किन मानिसको बुख्याँचा बनाइन्छ ?’ अनि उत्तर दिए, ‘किनभने, मानिस जस्तै बनाइदियो भने चरा डराउँछ ।’ माओवादीको नाम नलिएरै उनले भने, ‘अहिले कम्युनिस्ट जस्तै अर्को शक्ति बनाइदिएर कम्युनिस्टलाई तर्साउन खोजिएको छ ।’
पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका धारणा उनकै शब्दमाः
एउटा मोर्चामा हार्दैमा लडाइँ हारिँदैन
अहिले केही समस्या खडा गर्न खोजिएको छ । जनताका कलाकारले गीत गाउँछन्, एउटा मोर्चाको हारले सम्पूर्ण युद्ध हारिँदैन । कुनै मोर्चामा हारौँला, तर हाम्रा देशभक्तिपूर्ण विचारहरु हार्दैनन् ।
बहादुर कांग्रेस !
कसको ध्यान कहाँ छ ? तपाईंहरु यसै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । हिजो नेपाली कांग्रेसका केही नेताले उफ्रीउफ्री भाषण गर्नुभएछ, हामी सरकारमा गएपछि क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाटै सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्छौं र आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्छौं । उहाँहरुको ध्यान केमा रहेछ ? देश बनाउृँछौँ भन्नहुन्न, सरकार परिवर्तन गरेर सरकारमा गएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्छौ भन्नुहुन्छ । बहादुर पार्टी ! यति घोषणा गर्न पनि लाजशरम लाग्दैन ।
फोहोरी खेलमा छैनौँ
राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विचार र व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हामी त्यसलाई अन्यथा मान्दैनौँ । तर, हामी फोहोरी खेलका पक्षमा छैनौँ ।
माओवादी खुर्पाको बिँड
अस्ति म एउटा कार्यक्रममा जाँदा एकजना साथीले दुईवटा रुखको कथा सुनाउनुभएको थियो । एउटा जंगलमा दुईवटा रुख रहेछन् । तीमध्ये एउटा रुख काटिँदै रहेछ, छेउको अर्को रुख रोइरहेको रहेछ । अनि काटिँदै गरेको रुखले सोधेछ, ‘किन रोएको ? हामी रुख हौँ, काटिनु त स्वाभाविक हो, बञ्चराले हामीलाई काट्छ ।’ अनि त्यसले जवाफ दिएछ, बञ्चरोले काट्छ, त्यो त फलामको हो, हामीलाई काट्छ । त्यो त ठीक छ । तर, फेरि बिँड त हाम्रै जातको हालेछ । त्यसकारण रोएको हुँ ।’ माक्र्सलाई सिध्याउनुछ भने माक्र्सकै नाम जपेर, पुष्पलाललाई जिस्क्याउनुछ भने पुष्पलालकै नाम जपेर र कम्युनिस्ट सिध्यानुछ भने कम्युनिस्टकै नामको बुख्याँखा खडा गरिन्छ । माओवादी त्यही हो ।
एक मुठा घाँसको पछि दौडिन्छ
हामी बैचारिक द्वन्द्वमा छौँ । ६७ वर्षदेखि त्यो द्वन्द्व जारी छ । हामी सरकारमा एउटा सहमति गरेर गएका हौँ । एक तिहाई पनि छैनौँ तर नेतृत्व ग¥यौँ । त्यस्ता शक्तिसँग सहकार्य भयो, जो एक मुठा घाँस देख्यो भने त्यसैका पछि दौडिन्छ ।